ụkpụrụ nke brazing itinye n'ọkwa | induction igwe ihe eji eme oku | ihe ndozi oku
ụkpụrụ nke brazing induction
Ihe na-eme Brazing Basics
Ihe eji eme ihe maka brainting, ihe ọla na ọla, brazing, ígwè na igwe nchara, wdg.
Ngwunye Brazing na-eji okpomọkụ na ihe nzacha iji jikọta ọla. Ozugbo agbazere, na njuputa aga n'etiti nso-dabara adaba isi ọla (iberibe na-esonyere) site capillary edinam. Wụrụ awụ filler interacts na a mkpa oyi akwa nke isi metal na-etolite a siri ike, ihihi-àmà nkwonkwo. Enwere ike iji ụzọ dị iche iche ọkụ maka brazing: itinye n'ọkwa na ndị na-eguzogide ọkụ, oven, ọkụ, ọkụ, wdg. E nwere usoro brazing atọ a na - ahụkarị: okpu, ọkwa na ịkpụzi. Nzuzo na-emetụta nanị nke mbụ n'ime ndị a. Inwe ọdịiche ziri ezi n'etiti ọla ndị ahụ dị oke mkpa. Nnukwu ọdịiche nwere ike ibelata ikike okpu ma duga na nkwonkwo na-adịghị ike na porosity. Mgbatị ọkụ ahụ pụtara oghere ga-agbakọ maka ọla na brazing, ọ bụghị ụlọ, okpomọkụ. Kachasị spacing bụ Elezie 0.05 mm - 0.1 mm. Tupu ịkwado gị Brazing enweghị nsogbu. Mana ajụjụ ụfọdụ ka a ga - enyocha - ma zaa - iji mesie gị obi ike, ọ ga - abara gị uru. Iji maa atụ: Lee etu ọla ọla eji atule brazing kwesịrị; ihe bụ ihe kasị mma eriri igwe imewe maka kpọmkwem oge na àgwà chọrọ; Ihe nkwado a kwesiri ibu ntuziaka ma ọ bụ akpaka?
Na DAWEI Induction anyị na-aza ihe ndị a na isi ihe ndị ọzọ tupu anyị atụ aro azịza nkwado. A na-ejikarị ihe mgbaze ndị a maara dị ka agbanwe agbanwe oge a na-elekwasị anya na isi ọla. Flux na-ehichapụ ọla ala, na-egbochi ọxịdashọn ọhụụ, ma na-eme ka ebe a na-atụgharị ya tupu ya atụ. Ọ dị oke mkpa itinye usoro zuru oke; pere mpe ma ọ ga - agbanwe
jupụta na oxides ma tụfuo ike ya ichebe isi ọla. Flux anaghị adị mkpa mgbe niile. Igwe na-ebu Phosphorous
enwere ike iji braze ọla kọpa alloys, ọla na ọla. Enwere ike ịme brazing na-enweghị ike iji ikuku na ikuku na-arụ ọrụ, mana a ga-emezi brazing n'ime ụlọ ikuku na-achịkwa. A ga-ewepụrịrịrịrịrịrịrịrị aka n'akụkụ n'akụkụ ozugbo ihe nchara ahụ siri ike. A na-eji ụzọ mwepụ dị iche iche, ihe kachasịsịsịsịsị na mmiri, ịtụtụcha na waya ihichapu.
Categories FAQ Tags nnukwu brazing ugboro ugboro, nkwanye obi ike, Ihe na-eme Brazing Basics, eme ka brazing heater, ụkpụrụ nke brazing induction, ozizi nke brazing